Janaraal Gaafow: “nin Soomaali ah uu qof kale oo Soomaali ah uu tarxiilo ma loo dulqaadan karo” – Radio Muqdisho
Janaraal Gaafow: “nin Soomaali ah uu qof kale oo Soomaali ah uu tarxiilo ma loo dulqaadan karo”
Taliyaha hogaanka socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaaliya Janaraal C/laahi Gaafow Maxamuud oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay dhalinyaro Soomaaliyeed oo 5 ruux ah oo sida la sheegay laga soo celiyay magaalada Hargeysa ee magaalo madaxda gobolka Waqooyi galbeed Soomaaliya.
Janaraal Gaafow ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay isku dayayso markasta in dadka Soomaaliyeed loo fududeeyo safarada ay ku aadayaan gobolada dalka hase yeeshee maamulka Soomaaliland uu sheegay in in marar badan uu sameeyay in si gaar ah loo dhibaateeyo dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya taasina ay tahay mid aan loo dulqaadan karin.
“Waxaan aad ugu xunahay marar badana nagu soo noqnoqday marar badana dhibaato ka taagan tahay dadka Soomaaliyeed maanta dhibaato badan ayay qabaan way dhoofaan waxaa ay soo socdaan way sii socodaan Hargeysa iyo Berbera way aadaan waa kaga yimaadaa wanaag ayaa sameynaa qof walba oo Hargeysa ka yimaada ama Berbera ka yimaada ama Soomaaliy ka yimaada wax dhibaato ah ama mushkulad ah waligii nagalama uusan kulmin”.
“Waxaa nasiib daro ah oo caado noqotay in qof kasta oo Soomaaliya sheegtay in la dhibaateynaayo xabsi la geynaayo in si bani’aadminimada ka baxsan loola dhaqmaayo taasina waxaa ay keeni kartaa naceyb dhex mara shacbiga” ayuu yiri Gaafow.
Taliyaha laanta socdaalka iyo Jinsiyadaha ee dowladda Soomaaliya Janaraal C/laahi Gaafow Maxamuud ayaa ku booriyay maamulka Soomaaliland in ay ku dadaalaan sidii loo caawin lahaa dadka Soomaaliyeed.
“Shalay halkaan dadbaa diyaarad ka raacay muraadbay lahaayeen kharash baa galay dhibaatey galeen waxay noqotay halkii laga taakuleyn lahaa in xabsi la geeyo xalay xabsi ayay ku bariyeen saakana waa la soo tarxiiley in nin Soomaali ah qof Soomaali ah soo tarxiilo wax la qaadan karo ma ahan” ayuu markale yiri Janaraal Gaafow.
Saaxiibada Caalamku waxay ku dhiirri-gelinayaan Maamulka KMG ah ee Jubba iyo Dowladda in arrimaha Jira lagu xalliyo wadahadal iyo wadatashi
Wasiirka Amniga gudaha oo maanta gaaray Beledweyne